डाक्टर र नर्सले प्रसव पीडामा रहेकी महिलालाई गर्ने व्यवहार यही हो ? | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
मेरो नाम दुलारी खातुन हो । म त्रियुगा नगरपालिका-३, भुल्के उदयपुरमा ९ वर्ष देखि बसोबास गर्दै आइरहेको छु । म घरको काममै प्राय व्यस्त रहने गर्छु । कोरोनाले संसार अस्तव्यस्त भइरहँदा यसको असर हामीकहाँ पनि आइपुग्यो । उदयपुरको भुल्केलाई कोरोना सङ्क्रमण क्षेत्र भनेर तोकियो । सङ्क्रमणको केन्द्र यहाँको मस्जिदमा बस्ने मुस्लिमहरूमा हो भन्ने शङ्का गरिएको थियो । त्यसले डर र त्रास महसुस भयो । धेरै तनाव र पिर भयो । भुल्केमा कोरोना फैलियो भनेर चारैतिर हल्लाखल्ला भयो । डर लाग्न थाल्यो । तैपनि मनलाई बलियो बनाएर बसियो।
अब हामीमा पनि सङ्क्रमण फैलिने हो कि भन्ने डर भयो । घरमा साना केटाकेटीहरू र सास आमा हुनुहुन्थ्यो । उनीहरूमा सर्ने कुरामा डर भयो हामीलाई । सबैमा लाग्ने हो कि भन्ने शङ्काले पिरोल्यो । त्यो माथि म गर्भवती अवस्थामा छु त्यसैले गर्दा पनि झन् बडी पिर लाग्यो । पेटमा बच्चा भएको मानिसले चिन्ता र तनाव लिनहुँदैन भनेर भनिन्छ । तर यस्तो अवस्थामा तनाव भइहाल्दो रहेछ । तनाव लिँदैन भनेर बस्न सकिने रहेनछ । मनमा धेरै कुराहरू खेल्थ्यो । कोरोनाको डरले मलाई कमजोर बनायो । यस्तो अवस्थामा बच्चा कसरी जन्माउनु भनेर सोच्थे ।
‘बच्चालाई पनि कोरोना भयो भने?’ भन्ने कुराले मलाई सताइरहन्थ्यो ।
त्यो बेला टिभी, पत्रपत्रिका, रेडियो, छरछिमेक आदि सबैले स्थिति झन् खराब बनाए । म चाहन्थे वरपरकाले राम्रो कुरा गरिदिए मेरो मन पनि शान्त हुनेथ्यो । तर भइदियो अर्कै । सबै जनाले नकारात्मक कुराहरू मात्र गर्थे । हौसला दिनुको साटो डर मात्र देखाउने गरे सबै जनाले ।
‘यस्तो अवस्थामा तिमी सुत्केरी भयौँ भने तिम्रो बिजोक हुन्छ’
‘तिमीलाई कोरोना लाग्छ। तिमीबाट बच्चामा पनि सर्छ । ‘
छिमेकीहरू भन्थे- ‘अस्पताल लग्यो भने तिमीलाई धेरै दुःख दिन्छ । तिम्रो राम्रो उपचार गर्दैन । राम्ररी छुँदैन ।’ यस्ता कुराहरू सुनेर मन एकदमै आत्तिन्थ्यो । रुन मन लाग्थ्यो ।
म चाहन्थे सबैले हौसला र साथ दिउन् । ‘चिन्ता नगर हामी छौ’ भनुन् । तर सबै जनाले हल्ला फैलाउँदै मात्र हिँड्ने । कोरोनाले यति मानिसको मृत्यु, उति मानिसको मृत्यु, गर्भवती महिलामा यस्तो जोखिम, उस्तो जोखिम भन्दै हल्ला मात्रै फैलाउने गरे । आगोमा घिउ थप्ने काम हल्लै हल्लाको एउटा समाचारले गर्‍यो । सुत्केरी महिलालाई कोरोना सङ्क्रमण भएर मृत्यु भएको खबरले म एकदमै आत्तिए । खाना खानै मन लाग्न छाड्यो । म धेरै कमजोर भए ।
जे जस्तो भए पनि म बलियो रहन कोसिस गरिरहे । बच्चालाई जोगाउनु पर्छ भन्ने मेरो जोडदार कोसिस थियो । म बाहिर कतै निस्किएन । कसैसँग बोलिन । मेरो पहिलो प्राथमिकता बच्चा नै थियो । मनमा के लाग्थ्यो भने मलाई जे जस्तो भए पनि बच्चालाई चाहिँ जन्म दिन्छु । उसको जन्म सफल होस भन्ने कुरा मात्र मेरो दिमागमा थियो । बच्चाकै कारणले म लकडाउन भरी कोठामै रहे ।
दिन बित्दै गयो व्यथाको समय पनि आयो । त्यो बेला सम्म पनि मान्छे र गाडी कसैलाई पनि हिँड्ने, चल्न छुट थिएन । मलाई बेथा लागेर समस्या भइरहेको थियो । गाउँ कोरोना सङ्क्रमणको केन्द्र भएकाले पुलिसहरूको उपस्थिति बाक्लै थियो । बाहिर बाटोमा निस्कन पनि नदिइएको समयमा मलाई व्यथा लाग्यो । श्रीमानलाई गाउँको कसैलाई बोलाइदिन आग्रह गरे । पुलिसकहाँ पनि मेरो श्रीमतीको अवस्था यस्तो छ भनेर दुःख पोख्नुस् भने । मेरो श्रीमान् पुलिसकहाँ जानुभयो । श्रीमतीलाई व्यथा लागेको र गाडीमा अस्पताल जानु पर्ने भएकाले सोही आग्रह गर्नुभएछ प्रहरीसँग ।
प्रहरीहरूले सिधै मिल्दैन भनेछन् । अहिले जान मिल्दैन, नजानुस् भनेछन् । ठाडो भाषामा घरमै बच्चा जन्माउनु भने रे । श्रीमानले बिन्ती गर्नुभएछ मेरो श्रीमती कमजोर छ भनेर । अस्पताल गयो भने सलाइन पानी पनि चढाउँछ, हेरचाह हुन्छ, सुरक्षित हुन्छ । बच्चा पनि समयमै हुन्छ । आमाको ज्यान पनि जोखिममा हुँदैन । यस्ता बिन्तीहरू धेरै गर्नुभएछ । धेरै आग्रहहरू गरिसकेपछि प्रहरीले मानेछ । उनीहरूले नै फोन गरिदिने र गाडी मगाइदिने भनेछन् । एम्बुलेन्सलाई फोन गर्दा आउँदैन भनेछ । एम्बुलेन्सले नमानेपछि प्रहरीले आफै गाडी खोजेर जानु भनेछ ।
घर अगाडी एउटा अटोवाला थियो । श्रीमानले त्यही अटोलाई आफ्नो बिन्ती बिसाउनुभयो । अटोवालाले पनि जान्न भनेछ । अवस्था ठिक छैन र अटो चलाए प्रहरीले उसलाई समात्ने कुरा गरेछ । समात्यो भने फेरि क्वारेनटाइनमा हाल्ने डर रहेछ उसलाई । प्रहरीले अनुमति दिए मात्र जाने कुरा गरेछ । श्रीमान् प्रहरीकहाँ गएर दुःख बिसाउनु भएछ । तपाईँहरूले एक पटक भनिदिनु पर्‍यो भनेर । प्रहरीले २ जनाभन्दा बढी नजानु भनेर अनुमति दिएपछि अटो ड्राइभरले मान्यो । यतिन्जेल मलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो । अटोमा अस्पताल गयौँ । अस्पताल पुग्दासम्म मेरो पिडा सहन नसक्ने अवस्थासम्म पुगिसकेको थियो । तर अब त अस्पतालमा छु भनेर पिर अलि कम भएको थियो ।
एक छिनमा नर्स र डक्टहरू आँउलान । सलाईन पानी चढाउला । दुख्न अलि कम होला भन्ने सोचेर बसिरहे । जाने बित्तिकै नर्सहरू आउनुभयो ।
‘तपाईँहरू कहाँबाट आउनुभयो’ भनेर सोध्नुभयो । हामी भुल्केको मान्छे हो भन्ने सुन्ना साथ वहाँहरूले ‘यहाँ बस्ने हैन। बाहिर जानुस्’ भन्नु भयो । एउटा घर देखाइदिनु भयो । मलाई हामी त्यहीँ गएर बस्यौँ । सासूले ‘किन बाहिर बस्नु पर्ने म्याडम । भित्र लानुहोस् न । गर्भवतीको अवस्था ठिक छैन ।’ भन्नु भयो । नर्सहरू त्यस्तो गर्न सम्भव छैन, थपक्क गएर बस्नुहोस् भनेर हप्काए। धेरै नबोल्नुस् र हामीहरूले भनेको खुरुखुरु मान्नुहोस् भनेछन् ।
त्यसपछि मलाई सासूले डोराएर त्यो घरभित्र लानुभयो त्यहाँ भित्र बेड थियो र कपडाले घेरेको थियो। मलाई अस्पतालले गरेको सहयोग भनेको यति नै थियो।
म त्यहाँ सुतिरहेको थिए । मलाई व्यथाले सताइरहेको थियो । डाक्टर आउने कुनै छाँटकाँट थिएन । चेक गर्न पनि कोही आएन । घर खुलेको छ कि छैन, कमजोरी भएको छ कि छैन कसैले पनि एक पटक सोधेन । म पिडाले रुँदा रुँदा थाकिसकेको थिए । सहनै नसकेपछि सासू आमालाई फेरि डक्टर र नर्स मेरोमा आउन आग्रह गरिदिनु भने । सासू बाहिर गएर बोलाउन खोज्नु भयो । बाहिर अर्को सुत्केरीको एउटा कुरुवा मानिस बसिरहेको थियो । सासूले उसैलाई गएर डक्टर र नर्सलाई बोलाइदिन भन्नु भयो । बुहारीलाई व्यथाले धेरै नै गाह्रो भइरहेको छ भनेपछि उसले गएर ‘म्याडम केही गरिदिनु । उहाँलाई धेरै व्यथा लागिरहेको छ । बच्चा हुन आँटेको छ क्यार । ‘ भनेछन् । नर्स बल्ल बाहिर आएर रिसाउँदै ‘किन बोलाएको’ भनिन् ।
उनले झन् रिसाउँदै ‘तपाईँहरू पख्नु न एक छिन । एक घण्टा पछि डाक्टर आयपछि चेक गर्नुहुन्छ । डाक्टर आयपछि मात्र मैले हेर्छु तपाईँको बिरामीलाई’ भनिन ।
मेरो सासूले फेरि बिन्ती चढाउनु भयो । ‘त्यसो नभनिदिनु । बिरामीको हालत हेर्नुहोस् त कस्तो छ । कति दुखिरहेको छ उसलाई । रुँदा रुँदा धेरै कमजोरी भइसक्यो । यस्तो अवस्थामा कसरी बच्चा जन्मिन्छ? समयमा सुइँ दिनुभएन, पानी चढाउनु भएन भने कसरी उसले कसरी बच्चा जन्माउन सक्छ त? तपाईँहरूले किन यस्तो गर्नुभएको? डक्टर कतिखेर आउने हो थाहा छैन । तपाईँले एक पटक चेक गरिदिनुस्।’ भन्नुभयो
नर्सले भनिन ‘ त्यो अवस्थामा मान्छे मर्दैन । केही पनि हुँदैन । डक्टर नआई मैले कसरी छुनु । डक्टर आएर सबै जाचेपछी मात्र मैले बिरामी छुन्छु । ‘
डक्टर आउने कुनै छाँटकाँट थिएन । धेरै बेर कुरेपछि डक्टर आउनुभयो ।
आउनासाथ -‘भुल्केमा त कोरोना नै कोरोना छ रे त । धेरै हल्ला भइरहेको छ । समाचारमा आइरहेको छ । तिमीहरूलाई पनि कोरोना त लागेको छैन नि?’
उपचार गर्लान् भनेको त डक्टरले त्यसो भने । डक्टरले उल्टै त्यसो भन्दा हाम्रो मनमा पिडा र दुःख भयो । नलागेको मान्छेलाई पनि लागेको आरोप लागेको थियो ।
मैले भने- हेर्नुस् डक्टर साप । हामीलाई कोरोना लागेको छैन । किनभने हामी दोस्रो गाउँको हौँ । हाम्रो गाउँमा कोरोना फैलिएको छैन । हल्ला पनि चलेको छैन ।’
त्यति भन्दा पनि धर पाइन । डक्टरले श्रीमानको बारे सोधे । अनि नमाज पढ्न जान्छौ कि नाइँ भनेर पनि सोधे । ‘तिम्रो श्रीमान् नमाज जान्छ भने तिमीलाई पनि कोरोना लागेको छ । तिम्रो श्रीमानलाई पनि लागेको छ । तिम्रो परिवारलाई पनि लागेको छ । तिम्रो गाउँको सबैलाई कोरोना लागेको छ ।’ भने ।
मैले मेरो परिवारमा कसैलाई पनि लागेको छैन भन्दा डक्टर जङ्गिए- ‘तिमीले भनेर हुन्छ? तिम्रो परीक्षण गर्छु । अनि थाहा भइहाल्छ नि छ कि नाइँ ।
म केही बोल्न सकिन । म झन् कमजोर भएँ । मनमा अनेक कुराहरू खेल्न थाल्यो । मलाई पनि कोरोना लागेको भए त बच्चा कसरी जन्माउने भन्ने भयो । एक छिन पछि मेरो रगत लगेर के के जाँच गरे । रिपोर्टमा सामान्य देखियो होला नर्सले चेक गर्न थाल्नु भयो । डक्टरले अनुमति दिएपछि नर्सले अरू जाँचहरू पनि गर्न थालिन ।
नर्सले जाँचबुझ गर्दा एक घर मात्रै खुलेको छ अहिले बच्चा हुँदैन भन्नुभयो ।
मैले भने ‘अहिले बच्चा हुँदैन भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ ? मलाई यहाँ बारम्बार व्यथा लागी रहेको छ । मर्ने अवस्था आई सकेको छ । तपाईँहरू किन यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ ? यो अवस्थामा यस्तो नभन्नुस् ।
डाक्टर पनि यस्तै शब्दहरू भनेर जानुभयो । तपाईँहरू पनि यस्तै भन्नुहुन्छ । ‘ भने
‘तिमि बाठो हुन्छौ? मैले जे भन्छु त्यही गर । खुरुक्क जाऊ यहाँबाट । निस्केर गइहाल । ‘ रिसाएर भन्नुभयो ।
त्यस्तो अवस्थामा कसरी निस्केर जानु । अस्पतालमा सजिलो होला भनेर गएको त यातना जस्तै भयो ।
हामी रिस थामेर बसिरहेका थियौँ । रिस त यति उठेको थियो तर के गर्नु ।
पछि डक्टर आएर बच्चा अहिले हुँदैन ४ बजे मात्र हुन्छ भन्नु भयो । उता मलाई व्यथा झन् चढ्दै गयो । न त त्यो अवस्थामा मलाई समाउने कोही थियो न त मैले समात्ने कोही साथी नै ।
मैले बल लगाएर बच्चा जन्माउने भन्ने कुनै आस थिएन । गाह्रो भइरहेको थियो । सासूलाई फेरि एक चोटि पानी चढाइदिन भन्दिनु भनेर भने । त्यसले मलाई अलिक तागत आउँला, बल आउँला सुइँ र पानीले भन्ने लागिरहेको थियो ।
सासूले नर्सलाई पानी र सुइँ लगाइदिनु भन्नुभयो । तर नर्सले पानी सानी म चढाउँदिन र सुई पनि लगाउँदिन भन्नुभयो । ‘केही गर्नु पर्दैन आफै बच्चा हुन्छ । कुनै टेन्सन नगरे हुन्छ । त्यो बोतलमा पानी छ त । त्यहीँ पानी खानु । त्यही बाट तागत आउँछ । पर्दैन केही गर्न । ” भन्दै सासू आमालाई गाली गरे ।
मलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो मैले सासू आमालाई बोलाइएर नर्सलाई बोलाइदिनुस् भने । त्यसपछि उहाँले ‘मेरो बुहारीले तपाईँलाई बोलाउँदै छ’ भनेको सुन्नसाथ नर्स जङ्गिइन- ‘किन आउनु ? आउँदिन म । मेरो केही काम छैन र तपाईँहरूले जतिखेर बोलायो उति बेला आउने ? तपाईँहरूले जे भन्यो हामीले त्यही गर्ने ? हामी चैँ को हो र ? हामी पटक पटक आउने गर्दैनौ । हाम्रो अरू पनि काम हुन्छन् । अरू बिरामीहरूलाई चाहिँ हेर्नु पर्दैन ? तपाईँको बुहारीलाई मात्र हेर्न किन आउने । आउँदिन । भन्नुभयो । मैले जोडले कराएर एक चोटि आँउनुस भने । म रुन मात्र सकेको थिइन । उता व्यथाले समातिरहेको थियो । यता नर्सले तनाव दिइरहेकी थिइन् ।
किन बोलाएको मलाई भन्दै एक पटक झपारे पछि मैले उनलाई भने-‘ मलाई तपाईँहरूले नछोए पनि जाँच नगरे पनि केही फरक पर्दैन । तर एउटा पानी चैँ चढाइदिनु बिन्ती । म धेरै कमजोर भइसके । अब म सक्दिन बच्चा जन्माउन । म अति थाकिसके, गलिसके । मलाई एउटा पानी चढाई दिनु । तागत आउने सुइँ दिनु । अलिक बल आउँछ की बच्चा जन्माउन ।’ भने ।
‘पर्दैन । दिन्न म केही पनि । पानी पनि चढाउँदिन । सुइँ पनि दिन्न । पानी बोतलमा छ त्यही घटघट खानु । त्यहीबाट तागत आउँछ । अहिले म केही गर्ने वाला छैन । ‘ नर्सको उत्तर आयो ।
म पनि जङ्गिए ‘ मेरो अवस्था यस्तो छ । तपाईँले यस्तो बोल्नु राम्रो हो ? तपाईँको मनमा माया दया केही छैन ? म पनि छोरी मान्छे हो । तपाईँ पनि छोरी मान्छे हो । एक दिन तपाईँलाई पनि यस्तै समस्या पर्नेछ । अहिले हामीलाई राम्रो गर्नुभयो भने तपाईँलाई पनि राम्रो हुनेछ । तपाईँले मेरो दुख बुझ्दिनु भयो भने तपाईँको दुःख पनि अरूले बुझ्दिनेछ ।’
‘तिमि धेर नबोल । तिमी धेरै बाठो नहोऊ । खुरुक्क त्यही बेडमा बस्ने, त्यही पानी खाने, त्यही बच्चा जन्माउने । अब हामी फर्केर आउँदैनौ । तिम्रो बच्चा ४ बजे हुन्छ । जे जस्तो भए पनि ४ बजे भन्दा अघि म आउँदिन ।’ नर्सले भनेर जानुभयो ।
त्यसपछि हामीले के भन्नु, केही भन्न सकेनौँ । त्यही रुँदै कराउँदै छटपटीमा बसे । पेट दुखी नै रहेको थियो । व्यथा लागि नै रहेको थियो । कोही हेर्न पनि नआउने । सरकारी अस्पताल आउँदा पनि सुत्केरीको हालत यस्तो छ । कुनै वास्ता छैन । बेकार आएछु भन्ने लाग्यो । पछुतोले घेरिए । बरु घरमै दुःख सुख गरी जन्माएको भए पनि हुन्थ्यो । बरु घरमा जन्माएको भए वरिपरिको मान्छेले पनि आएर सहयोग गर्दिन्थे । हौसला दिन्थे । अस्पताल आउनु ठुलो गल्ती भयो ।
सासू पनि रुँदै हुनुहुन्थ्यो । बेकार आएछौ भन्दै हुनुहुन्थ्यो ।
१ बजेतिर मलाई सहनै नसक्ने गरी व्यथाले च्याप्यो । भुईँमा एउटा बेड लाइदिएको थियो । माटै माटो, धुलै धुलो थियो । बच्चा झर्न थालिसकेको थियो । सासू आमाले नर्सलाई गएर भन्नुभयो । म्याडम गइदिन पर्‍यो, बच्चा निस्किसक्यो भनेर भन्दा नर्स फेरि कड्किछन् -‘ के को बच्चा हुन्छ हुँदैन । मैले तपाईँलाई भनिहाले चार बजे पछि मात्रै हुन्छ भनेर । त्यतिकै रोइराखेपछि पेट त दुखी हाल्छ नि । सुत्केरीलाई पेट डाँड दुखिहाल्छ नि । त्यो नदुखीकन बच्चा हुन्छ त ? ‘
बच्चा तल झरी सकेको कुरा फेरि गरेपछि उनीहरूले डुम्री(त्यहाँ भएको अर्को व्यक्ति)लाई पठाए । डुम्रीलाई ‘जाऊ गएर हेर त कहाँ आएको छ बच्चा’ भनेपछि डुम्रीले चेक गरिन । डुम्रीले हात हाल्दा बच्चा तल आइसकेको थियो ।
त्यसपछि नर्सलाई गएर भन्यो ‘बच्चा तल आइसको छ । टाउको तल आएको छ। उसले जति बल गर्दा पनि बच्चा हुँदैन’। त्यसपछि नर्स पन्जाहरू लगाएर आउनुभयो । नानीको टाउको थोरै निस्किएको थियो । पुरै निस्किएको थिएन । तर नर्सले पक्रेर स्वात्तै तान्दिइन । खल्याकखुलुक्क पारेर तान्दिइन ।
ननिस्किएको नानीलाई कोरोनाको डरका कारण सबै तान्दिइन । म हुरुक्कै भएर कराए । अब म बाँच्दिन होला भनेर सोचे । सासू आमा पनि रुनुभयो र उहाँले रिसाएर ‘यसरी पनि बच्चा तान्ने हो? बच्चा मर्दैन यसरी ताने’ भन्नुभयो ।
नर्सले गाली गरिन ‘ तपाईँ बुझ्नु हुन्छ ? तपाई डक्टर हो ? तपाई बुझ्ने भए किन यहाँ लिएर आउनुभएको ? घरमै बसेर जन्माएको भए त भइहाल्थ्यो नि । मलाई थाहा छ बच्चा बाँच्छ कि बाँच्दैन भनेर । तपाईँले सिकाउनु पर्दैन। ‘
बच्चा निकालेर बेडमा राखिसक्दा पनि रोएन । न त रोयो न त करायो । १०,१५ मिनेटसम्म पनि बच्चा केही रोइ कराइ नगरेपछि मलाई लाग्यो मेरो बच्चा मरिसक्यो । म रुन थाले । उता रगत थामिएको थिएन । रगत बगिरहेको थियो । पेट त्यस्तै दुखिरहेको थियो । नानीलाई के भयो भनेर सासू आमा पनि रोएको रोयै । के भन्न सकिन । नर्सहरूले बच्चाको नाक पुछपाछ पारिदिए । लौ तिम्रो नानी भन्दै मेरो हातमा राखिदिए । राम्रोसँग पुछिदिएका पनि थिएनन् । मुखै भरि रगत लागिरहेको थियो । नाइटोमा झुन्डिएको चिजलाई पनि केही गरिदिएनन् । त्यसपछि सासू आमाले फेरी पुछपाछ पारिदिनु भयो । अनि नानीलाई हल्लाएपछि बल्ल नानी रोयो रे । म पुरा बेहोस थिए । रगतमा डुबिरहेको थिए ।
डाक्टरले के के भन्दै थिए मैले बुझिरहेको थिइन । होस हराएको थियो । केही सुनिन। केही बुझिन । बच्चालाई के गर्‍यो कसो गर्‍यो केही थाहा पाइन । पछि सासूले भन्दै थियो । डाक्टरले केही गर्नु पर्दैन घर लाँदा हुन्छ। अब हामीलाई केही मतलब छैन । हामीले बच्चा निकालिदियौँ । तपाईँको नानी राम्रो छ । अब हामीलाई केही नभन्नु । पुछपाछ पार्नु, गाडी बोलाउनु अनि जानु भनेका रहेछन् ।
डुम्रीले पनि मलाई केही गर्दिएनन् । बच्चा जन्मिँदाका फोहोरहरू सबै डुम्नीहरुले सफा गरिदिन्छन् । तर मलाई गरिदिएनन् । बच्चा निकाल्दिएर उनीहरू गए । १ घण्टा सम्म पनि होस आएन ।
त्यस्तो अवस्थामा कसरी दूध खुवाउनु नानीलाई । नानी रुन थालेपछि दूध खोज्न थाल्यो । रुन थाल्यो । यस्तो कमजोर अवस्थामा कसरी दूध खुवाउनु । म आफै कमजोर भएको थिए ।
घर जान पनि अप्ठेरो थियो । प्रहरीले कसैलाई आउन दिइरहेको थिएन । घरका मानिस पनि आउन पाएनन् । अप्ठेरोसँग नै घर गयौ ।
मलाई अस्पतालले दिएको दु:खको बारेमा उजुरी गर्न मन लागेको थियो तर सकिन । मेरो कुरा कसले सुनिदिने? सम्बन्धित निकायमा जानै सकिन । नर्स र डाक्टरले त मलाई यस्तो गरे भने अरूबाट के आस गर्नु । छर छिमेक पनि हामीलाई देख्ने बित्तिकै गाली गर्थे, हामी देखि परपर भाग्थे । त्यो बेला म र समाजको सम्बन्ध फरक थियो । मेरो त्यो अवस्थामा भगवान् सरहका डक्टरले त यस्तो गरे भने अरूबाट झन् केही आस थिएन ।
मैले गर्भवतीको बेला पनि मैले आवश्यक पौष्टिक आहार, औषधी र चक्कीहरू खान पाइन । दुई पटक अस्पतालमा जाँच गर्न जान पाएँ । त्यो बेला मलाई दुईचोटी सुइँ लाइदिए । आइरन चक्की पनि दिए । त्यो २ पटक सुइँ लगाउने बित्तिकै कोरोनाको होहल्ला भयो । हल्ला भएपछि त अस्पतालहरू बन्द । पसलहरू बन्द । हिँड्न पनि बन्द । दिएको जति चैँ मैले खान पाए । त्यसपछि पौष्टिक आहारा र तागत आउने चिज केही खान पाएन ।
सुत्केरी हुँदा वडा कार्यालयबाट हर्लिक्स, चना, मटर, चिया पत्ती, ज्वानो आदि पाएको थिए । तर त्यो कति दिन नै टिक्थ्यो र । ५-१० दिनमा सकिइहाल्यो ।
घरमा पनि केही थिएन । त्यो बेला गाडीहरू पनि बन्द थियो । दोकानहरू पनि सबैतिर बन्द थियो । भनेको सामान सजिलै किन्न नपाउने । सुत्केरी हुँदा खानु पर्ने कुराहरू केही पनि श्रीमानले ल्याउन पाउनु भएन । पसलहरू पनि हामीलाई सामान नदिने । स्थिति अप्ठ्यारो थियो ।
कोरोना अघि मेरो खुसीको जिन्दगी थियो । बच्चाको कुराले हामी सबै हर्षित थियौँ । कोरोनाको केही हल्ला थिएन । समय आपत् कालीन थिएन । खान्थे, बस्थे । पेटमा नानी थियो । एकदम खुसी थिए । पहिले जे भन्यो त्यहीँ पाउँथ्यो । घरको मान्छेले सबै ल्याइदिनु हुन्थ्यो । कोरोनाको हल्ला नभएका कारण सुइँ लाउन पाउँथे, आइरन चक्की खान पाउँथे, फलफूल खान पाउँथे । सबै थोक थियो कोरोना भन्दा पहिले । तर जब कोरोना आयो, जिन्दगीमा सोच्न पनि नसकेको पिडा र दुःख आइप्यो ।
मलाई साह्रै दुख भयो । अति पिर भयो । मानसिक यातना भोग्नु पर्‍यो । भगवान् मानिने डक्टर र नर्सले जुन व्यवहार गरे त्यसको प्रतिफल उनीहरूले पाउन । कसैले सहयोग गरेर मेरो समस्याको कुरा उठाइदिए जस्तो लाग्छ । मेरो भोगाई प्रति कसैको दया जागोस् ।
यो कथा दुलारी खातुन संग गरिएको कुराकानीमा रहेर हाम्रो साथी बिक्रम राईले लेख्नु भएको हो ।